Ny ilàna ny fahasamihafan'ny hetsi-pandaminana
Home » Sotsiaalse meedia turundus
09.05.2020 Category: Sotsiaalse meedia turundus
Ny 2017 dia manamarika ny fiakaran’ny vidim-panafody mivantana amin’ny orinasa goavana sy madinika izay mikatsaka ny fanampiana ireo mpanindrahindra malaza indrindra hanampiana ny tetikady ary hampiroborobo kokoa ny marika amin’ny m. Miaraka amin’ny fanadihadiana manamarika fa mety hisy vokany ratsy Mamolavola petrenan’ny 960% amin’ny fampiasam-bola, azo antoka ny miteny moe ny mpivarotra entana dia eto mba hijanonana.
Na eo aza ny fitomboan’ny fampiroboroboana ny indostria, mbola eo amin’ny toerana misy ny fahasamihafana mbola ilaina ho an’ny marika sy orinasa amin’ny tetikady ara-barotra. miaraka haino aman-jery sosialy ary ny dokam-barotra nomerika mankany amin’ny ambaratonga maneran-tany, dia ilaina ny filàna ny fahasamihafana.
1 Ny tontolon’ny hetsi-pandaminana
1.1 Алгоритъм izay malemy
1.2 Nahoana no tsy maintsy miova ny hain-trano henjana?
1.3 Manao fiovana izay mety
2 Ny onjam-peo vaovao avy amin’ireo mpanentana isan-karazany
3 Ny vehivavy mpivarotra
3.1 Ан Хендли
3.2 Мари Смит
3.3 Мадалин Скляр
4 Ny fahasamihafana dia zava-dehibe ho an’ny taranaka vaovao
Ny tontolon’ny hetsi-pandaminana
Niverina tao amin’ny 2015, Предприемач nanangona lisitr’ireo influencétiques ara-barotra an-tserasera mba hijery (lahatsoratra nesorina). Zavatra iray nokaramain’ny lisitra ny hoe ny ankamaroan’ny mponina no fotsy hoditra.
Raha mbola teo am-piterahana foana ny fivarotana ny vokatra, dia azo antoka fa kely dia kely ny mpitaona ny manam-pahaizana.
Heverinao fa ny 2017 dia tokony hahita fahasamihafana bebe kokoa amin’ny tanjon’ny influencers.
Нефа циа. Статии от Manampahefana Digital ny Уместност dia maneho fa ny fanehoana ny vehivavy sy ny vitsy an’isa dia mbola tsy ampy ao anatin’ny indostria.
Tsy mahagaga raha efa nisy foana ny valin-davenona ho an’ny vehivavy sy ireo vitsy an’isa ao amin’ny sehatra "влиятелните личности".
Алгоритъм izay malemy
Lahatsoratra iray navoakan’ny lahatsoratra Huffington Post Mifanakalo hevitra amin’ny алгоритъм fitarihana Linkedin niverina tao amin’ny 2013. Ao amin’ny lahatsoratra, nanambara i Linkedin fa ny алгоритъм dia mifototra amin’ireo tarehimarika main-danja "faritra, sekta ary kolontsaina izay miantraika sy mitondra fiadian-kevitra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena".
Na dia izany aza, ny ankamaroan’ireo voan’ny sari-tany voatondro dia mbola lahy.
Mazava fa i Linkedin dia manana fitoviana eo amin’ny lahy sy vavy amin’ny алгоритъм, ary a tatitra avy amin’ny Seattle Times nanaporofo izany. Tsy vao tamin’ny 2016 izany Nanapa-kevitra ny hanavao ny алгоритъм i Linkedin mba tsy hisian’ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy ny vavy rehefa mikaroka sy manasa olona manaraka azy.
Nahoana no tsy maintsy miova ny hain-trano henjana?
Ny fiavian’ny fampahalalam-baovao sosialy dia nahita marika maromaro nitsambikina tamin’ilay fiaramanidina mpilatsaka an-thathatra mba hanangona mpijery vaovao. Mampalahelo fa indraindray ny mpividy sy ny sampan-draharahan’ny dokam-barotra no manamarika ny marika ary mifarana amin’ny fampielezan-kevitra izay namela resa-be teo amin’ny marika.
Ny adi-panaon’ny Pepsi vao haingana no ohatra iray amin’izany, izay nandraisan’izy ireo Kendall Jenner amin’ny sehatra ara-barotra izay toa manimba ny maha-zava-dehibe ny hetsi-panoherana "Черна жива материя" дао Батон Руж. Ity dia mampiseho ny fomba tsy ahafahan’ny mpivarotra raharaham-barotra ao Pepsi miaraka amin’ny mpihaino azy.
Navoaka ny dokambarotr’i Kendall Jenner Pepsi taorian’ny naha-voatsikera azy ho fanoherana mahery vaika noho ny antony ara-drariny ara-tsosialy.
Na dia misy aza tongava miaraka amin’ny lahatsoratra Instagram tonga lafatra mba hampiroboroboana ny marikao, noho ny fanoheran’ny mpanohitra azy amin’ny fampiroboroboana azy dia mety hiteraka vokatra mampidi-doza.
Miaramila sy tanora tanora ankehitriny manantena fahasamihafana bebe kokoa amin’ny dokambarotra, marika dia tsy afaka miankina amin’ny tetik’ady ara-barotra amin’ny fampitomboana ara-barotra; ary tsy maintsy manaiky fomba maro samihafa amin’ny marketing aman-dalàmpika sy ny mpanamory izay maneho azy ireo.
Manao fiovana izay mety
Ny orinasa, lehibe sy madinika, dia nanomboka nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny varotra kolontsaina marolafy ao anatin’ny marika ary nanomboka nanangona fahasamihafana bebe kokoa tamin’ny fampielezan-keviny.
Mpanjifa Target fotsiny no nanao izany tamin’ny fanomezana lamaody momba azy Amin’ny fanekena fa "ny vehivavy dia tonga amin’ny endriny rehetra, ny habeny sy ny foko" ary ny tsi firaharahiana ireo mpihaino ireo dia fanaraha-maso goavana ny fanentanana teo aloha.
Ny fitantanana Shade dia masoivohon’ny fitantanana ny maintin’ny mainty hoditra sy maoderina.
Ny orinasa fitantanana играчка ny Shade Management Manolotra sehatra ho an’ny marika sy ny masoivoho mba hifandray amin’ny influencé ny loko sy ny vitsy an’isa. Ireo làlana rehetra sy ireo hetsika samihafa ireo dia manampy amin’ny fampiroboroboana ny varotra any amin’ny orinasa maro samihafa ary manantena ny hanomboka ny onjampeo vaovao.
Ny onjam-peo vaovao avy amin’ireo mpanentana isan-karazany
Ny mpikaroka dia mila misaina ivelan’ny boaty ary manintona ny mpanafika izay maneho tsara kokoa ny fiiarahamoniny raha te-hanohy ny fironana izy ireo. Soa ihany fa misy vehivavy maromaro sy mpitaingin-tsoavaly avy amin’ny foko samihafa misongadina ary manao ny marika ao amin’ny orinasa.
Izy ireo dia avy amin’ireo vehivavy manana endrika malaza ao amin’ny indostrian’ny varotra dizitaly amin’ny mpankafy ny media sosialy izay mandidy feo goavana manerana ny tsena Aziatika.
Ny vehivavy mpivarotra
Nandritra ny fotoana lava indrindra, ny sehatry ny fivarotana dia fitarihana ny lehilahy. Tato anatin’ny taona vitsivitsy anefa dia nahita vehivavy be dia be izay ty vitan’ny manatsara ny fivarotana nomerika fotsiny fa manaporofo fa afaka ny hahomby играчка ireo lehilahy ao amin’ny orinasa izy ireo.
Fantatra amin’ny maha-mpisava lalana azy ao amin’ny indostrian’ny varotra dizitaly, An Handley no Manampahefana Ambony momba ny MarketingProfs ary mpanoratra gazety iray ho an’ny gazetin’ny Предприемач. Navoakan’i Forbes ho iray amin’ireo vehivavy bilaogera amony indrindra sady vehivavy manan-kaja indrindra ao amin’ny media sosialy, manome fomba fijery vaovao ho an’ny marika i Handley miaraka amin’ny fomba fijery ayha manam-panam ay manam-panam ny varotra.
Araho ary mifandray: /Ann.Handley
Tsy misy afa-tsy "mpanjakavavin’ny Facebook" tokana ary Mari Smith izany. Mpitondra fanta-daza amin’ny mediam-bola Facebook sy media sosialy, i Smith dia mandray ny fandraisana andraikitra amin’ny media sosialy ho an’ireo mpandraharaha sy orinasa ho amin’ny sehatra hafa amin’ny anarana lehibe toa an’i Tony Робинс, сър Ричард Брансън и Далай Лама. Raha ianao no izy mikasa hanatsara ny fidiranao Facebook, Mari Smith no olona handeha.
Araho ary mifandray: / MariSmith
Twitter dia fitaovana mahagaga ho an’ny marika sy ny mpitaona amin’ny fifandraisana amin’ny mpihaino azy ary ny fampiasana azy tsara dia mety hitondra vokatra tsara. Ireo marika miezaka hanatsara ny fidiran’izy ireo amin’ny Twitter dia mitodika any amin’i Madalyn Sklar, iray amin’ireo vehivavy manan-danja indrindra ao amin’ny Twitter. izy bilaogy, mamorona votoaty ary manabe orinasa sy orinasa momba ny fomba ahafahan’izy ireo mahazo mpanaraka bebe kokoa amin’ny Twitter.
Araho ary mifandray: @Jinnyboy . @Poconggg . / Пимта
Ny fahasamihafana dia zava-dehibe ho an’ny taranaka vaovao
Ny fanisam-bahoaka dia maminavina fa amin’ny 2050, ireo vitsy an’isa (Hispanika, Aziatika, ary Afrikana-Amerikana / Black) dia hitazona ny 54 isan-jaton’ny mponina Amerikana. Ankoatr’izany ny tsenan’ny Aziatika mitombo hatrany, dia hita fa ny marika sy ny orinasa dia mila manangona ny tsi fahampiana ary mahatsapa bebe kokoa ny fahasamihafàna raha ny momba ny маркетинг маркетинг.
Isika amin’ny maha-mpangalatra antsika dia mila miaraka amin’ireo fotoana ary manova ny fomba fijerintsika ireo mpanararaotra na miala aina.
纽约州2017 dia manamarika ny fiakaran’ny vidim-panafody mivantana amin’ny orinasa goavana sy madinika izay mikatsaka
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao凤凰城，亚利桑那州。 Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra 2003 Avy
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix, Արիզոնա. Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix, Arizona. Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix، Arizona. Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina a Phoenix, Arizona. Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra
WordPress vs DIY Veb İnşaatçılar: Iza no tokony hampiasainao?
Ingqungquthela yewebhu 2014-UkuKhutshwa，iZiko zeSomlomo ezibalulekileyo，iPITCH，kunye ne-Startups
Ke Kōkua Hoʻomaka: O, Pūnaewele Inoa’yı mi? O aha ka Domain? ‘Okoʻa nā ʻokoʻa ma waena o kahi inoa inoa pūnaewele a me ka pūnaewele kikowaena
7 trin for din e-mailorganisation og d’Héichten og Är Woch ze tilføjelse
7 tip til reduktion af WordPress-databasestørrelse
Elektron poçt bülleteni ilə Iyong Blog-a daxil olursunuz?
Yazı sürətləndirmək və keyfiyyətli blog yazıları hazırlamaq üçün 8 üsul
Ինչու պատմությունը պատմելը բլոգավարման կենսական մասն է
Nie u gewone top 10 aanbiederslys nie
My Bochum Akụkọ: Rishikimi i Ndihmës Ogbe
Հավելյալهای 17 فیس بوک برای ادغام وردپرس
New fomba famokarana ny bokinao # 5: Fomba fijery 11 hampivoarana ny bokinao